Lahatsoratra nataon'i Vivek Sriram momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Vivek Sriram
Talohan'ny nidirany tao amin'ny Lucidworks, Vivek dia nitarika ny famokarana vokatra sy orinasa ho an'ny orinasam-pikarohana ao amin'ny Amazon Web Services, toerana namoronany ny Amazon Elasticsearch Service ary nanampy tamin'ny fampiroboroboana ny orinasam-pikarohana hatramin'ny nanombohany hatramin'ny ambaratonga lehibe. Nandritra ny 20+ taona niasany tamin'ny lozisialy Vivek dia niasa tamin'ny sehatry ny injeniera, ny fandrosoana ary ny anjara toeran'ny vokatra tamina orinasa isan-karazany toa an'i Vizu (azon'i Nielsen), Aggregate fahalalana (azon'i Neustar), ary SBI Razorfish.
Alakamisy, Aogositra 27, 2020 Alakamisy, Septambra 17, 2020 Vivek Sriram
Ny fikarohana no fiteny iraisan'ny rehetra. Ary ny boaty fikarohana dia vavahadin'ny valin-teninao rehetra. Ao an-trano manonofinofy momba ny fandriana vaovao ho an'ny efitranonao? Farafara fatoriana tsara indrindra Google ho an'ny trano kely. Eo am-piasana manandrana manampy ny mpanjifa hahatakatra ny safidin'izy ireo? Tadiavo ao amin'ny intranet-nao ny vidiny sy ny antsipiriany farany azo zaraina amin'izy ireo. Amin'ny fampisehoana tampony, ny fikarohana sy ny fizahana dia mampisondrotra ny tsipika ambony sy ambany. Mividy bebe kokoa ny mpanjifa ary tsy mivadika,